The Transport News (http://www.thetransportnews.com/) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Crime News The Transport News (http://www.thetransportnews.com/)
The Transport News (http://www.thetransportnews.com/)
The Transport News ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် ကြာချိန် ၅ စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ အထူးအရေးပေါ် သတင်းများကိုဆိုဒ်အပေါ်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေးထားသည်။ The Transport News ၌မြန်မာ့ငွေးကြေးဈေးကွက်များ၊ မြန်မာပြက္ခဒိန်များ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများရဲ့ နိုင်ငံများအားဖော်ပြပေးထားသည်။ မြန်မာသတင်းများကိုကဏ္ဍအလိုက် အထူးအရေးပေါ်သတင်းများအပေါ်တွင် ခေါင်းစဉ်များခွဲပြီးဖော်ပြသည်။ သတင်းရင်းမြစ်များမှာကိုယ်ပိုင် သတင်းထောက်များ၊ ဆောင်းပါးရေးသားသူများ၏သတင်းများကိုအများဆုံးဖော်ပြသည်။ မြန်မာအစိုးရဖက်စပ် ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သဖြင့် သတင်းရင်းမြစ်သည် ယုံကြည်ရသည်။နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းမှ ကမ်းနားလမ်းကိုဖြတ်ကာခုံးကျော်တံတားတစ်စင်းကိုတည်ဆောက်မည် ကဲ့သို့ ပြည်တွင်းသတင်းများ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လျှို့ဝှက်သတင်း အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Wikileaksကိုအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါက်ကြားမှုနဲ့ အရေးယူခံထားရတဲ့ အမေရိကန် စစ်သား Bradley Manning သတင်းစသော နိုင်ငံတကားသတင်းများကိုစုံလင်စွာဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာ့ပြည်တွင်းသတင်းများအားအဓိကတင်ပြသည်။ သတင်းရင်းမြစ်များကိုမြန်မာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာရေကြောင်းဦးစီး၊ မြန်မာလေကြောင်းဦးစီး၊ မြန်မာပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ မြန်မာ့ လေကြောင်းများမှ ရယူသည်။
The Transport News
The Transport News isavery fast and easy-to-navigate online Myanmar news journal. One can refer The Transport News easily for updates on Burmese Money Market, Currency Exchange Rates, and Myanmar Calendar.
The Transport News presents several categories of news for Myanmar readers. Majority of news on The Transport News are written by the professional writers at The Transport News itself.
The Transport News is correlated with Myanmar Government. Several crime news like Bradley Manning’s 35 years prison term for passing files to WikiLeaks, etc. The Transport News usually gather information from
Myanmar Ministry of Transport, Myanmar Ministry of Marine Department, Myanmar Ministry of Aviation Department.
Previous articlePopular Myanmar (www.popularmyanmar.com)
Next articleThitHtooLwin (http://www.thithtoolwin.com/)
သံပရာသီး၊ သံပရိုသီးတို့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အနာဂတ်မှာ သင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသက်မွေးရမလဲဆိုတာသိချင်ရင် ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အမြဲတမ်း မကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
သင့်သမီးကို ဘယ်လိုမျိုး ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့ ဆုံဆည်းစေချင်လဲ။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို အိမ်စိုက်ခင်းလေးမှာ စိုက်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
၂ဝ၁၈၏အပတ်စဉ်ဂန္ထဝင်ဗေဒင် (ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ)
လူသားတွေက ဦးနှောက်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့ ဥပမာများ